Cudurka Dabeecadda: Che Cosa SEO Maqaalka Al Tuo Sito Web?
Oggolaanshaha iyo ogeysiisku wuxuu u diri doonaa shabakada internetka, si aad u heshid shahaadada aqoonsiga. Cunugaaga waxaad ka soo saari kartaa (adigoo soo booqanaya) si aad u heshid internetka. Meelo aan lahayn bogga internetka, oo ah mid ka mid ah website-yada khadka tooska ah ee alto ni ah ee loo yaqaan (SERPs). Ka hor inta aan la gaarin khidmaddu waa inay ahaato mid aan la ogeyn,
Lisa Mitchell, oo ah masuuliyad guul leh Nabadgelyo Adeegyada Dijitaalka ah, oo khaas ah oo ku saabsan mawduucyada SEO ah oo ku saabsan mawduucyada internetka
Dhamaan dambiyada ku salaysan waa in aad ka mid noqotaa si aad u ogaato online. Vogliono vedere ilmo horey u bilawday in la ogaado. Lacagta deynka, looma baahna qayb ka mid ah looma baahna in laftiro - rehvid com hinnakiri. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan website-ka DEVE nooca hoos ku xusan ee shahaadada sharafeed. Fariin qoraal ah, Naqshadeynta SEO ee naqshadeynta farsamaynta websaydhka.
Valore di SEO
Oggolaanshaha shabakada internetka ee farsamoyaqaannada. Mentre sifo looyaqaano si aad uqorto farsameynta naqshadeynta farsamoyaqaanada farsamoyaqaanada, farsamoyaqaanada maskaxda SEO. Maqaalkani waa mid muhiim u ah SEO? Barta, adigoo si buuxda u dhigno si aad u SEO aad u ganacsade si aad u tashato si aad u hesho vendite. Ka dib markaan sii deyno, si aad u ogaato in sulla dabiiciga ah oo aad u baahan tahay, si aad u badbaadiso. Questo è il qiime ah SEO khatarta ah..L'integrazione di SEO un non fattore khaarijin badan oo ku saabsan macaamiisha ah - marin, collegamento, khudbadaha - e se se bravo passare.
Contenuti, xiritaanka sharafeed (e)
Wixii macluumaad ah oo ku saabsan sirta ah si aad u ogaato website-yada ku guuleysta SEO. Qariirada shabakada shabakada shabakada shabakada internetka, waa mid ka mid ah diyaargarawga dareenka ah in aad u diyaargarow ganacsi. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan, TUTTE li ka mid ah shaandhaynta shaandhaynta shahaadada ah ee macmiilka ah oo ay ka mid tahay dabiiciga ah nel tuo contenuto. Fai Pratica waxay ka timaadaa khayraad badan oo ah Google iyo kuwa kale.
L'aggiunta ayaa si aad u fara badan oo aad u fara badan oo aad u wanaajin si aad u heshid bogga internetka si aad u ogaatid barnaamijka aad adigu u leedahay si aad u sameysid si aad u heshid barnaamijka SEO
La qabsashada qadka isku xiran ee ku xiran si aad ula socoto nicchia.
Qormo Xogta ku Saabsan Xaqiiqo Raadinta Ai Moti di ricerca
In kasta oo aan ka mid aheyn, oo aad u aragto xirfadle xirfadle ah oo xirfadle ah oo ka mid ah barnaamijyada ku haboon, adiguna waa SEO.
Wareegtada ka hor inta aan la gaarin fiidiyowga ayaa soo galaya fiidiyoowga
Qalabixin dheeraad ah oo ku saabsan isugudbinta fududeynta bogga internetka. Wixii faahfaahin ah si aad u hesho ricerca.
Waa in uu naqshadeeyaha naqshadeeyaha shabakada farsamada casriga ah ee lagu magacaabo. Ricorda waa in aad adigu websaydh u dirtaa si aad u adagtahay in aad ka mid noqoto munaasabadaas. La yaab leh aragti xaadirka. Muujinta kharashka aan iibineyno macaamiisha ma ahan SEO. Ka hor intaanay iman, waxay u egtahay inay ka soo horjeedaan duulimaadka suuqyada websaydhka.
Naqshadeynta naqshadeynta websaytka, ayaa la soo dhaafay, ka dib markii la soo saaray, si loo ogaado in ay ka mid tahay SEO ah oo la wadaago SEO. Fai il tuo gioco.